လူလည်ကောင်မှာ မယားငယ်ကို အသေအကြေ ရိုက်နှက်တဲ့ ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်ရေပန်းစား | Buzzy
လူလည်ကောင်မှာ မယားငယ်ကို အသေအကြေ ရိုက်နှက်တဲ့ ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်ရေပန်းစား
ကားထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး ဗျင်းတာပါ
တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ အမျိုးသားတွေက အငယ်အနှောင်းထား ၊ ဒါပေမယ့် ဘာဆိုဘာမှ အပြောမခံရပဲ မယားငယ်ဖြစ်သူကိုသာ မယားကြီးက လူပုံအလယ် လာရောက်ရိုက်နှက် နှိပ်စက်တာမျိုး ဗီဒီယိုတွေ မကြာခဏ ထွက်ပေါ်တက်ပါတယ်။ အခုလည်း ဒီလိုဗီဒီယိုတစ်ခု ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ တရုတ်အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့ မယားငယ်တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ထား ပြဿနာတက်ရင် သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲ ဘေးကနေ ၇ပ်ကြည့်နေနိုင်သလားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာတာပါ။
တရုတျနိုငျငံမှာတော့ အမြိုးသားတှကေ အငယျအနှောငျးထား ၊ ဒါပမေယျ့ ဘာဆိုဘာမှ အပွောမခံရပဲ မယားငယျဖွဈသူကိုသာ မယားကွီးက လူပုံအလယျ လာရောကျရိုကျနှကျ နှိပျစကျတာမြိုး ဗီဒီယိုတှေ မကွာခဏ ထှကျပျေါတကျပါတယျ။ အခုလညျး ဒီလိုဗီဒီယိုတဈခု ထပျမံထှကျပျေါလာပွနျပါပွီ။ တရုတျအမြိုးသားတှအေတှကျကတော့ မယားငယျတှေ တဈယောကျပွီး တဈယောကျထား ပွဿနာတကျရငျ သူတို့နဲ့ မဆိုငျသလိုပဲ ဘေးကနေ ရပျကွညျ့နနေိုငျသလားလို့ မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈလာတာပါ။
ယခုဖြစ်စဉ်မှာလည်း စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့ မယားကြီးဟာ မယားငယ်ကို သူငယ်ချင်းတွေရဲ. အကူအညီနဲ့ ကားထဲကနေ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲထုတ်ပြီး ရိုက်နှက်နေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆောင့်ခဲ့သလို ၊ အဝတ်အစားတွေကိုလည်း ဆွဲချွတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ယခုဖွဈစဉျမှာလညျး စိတျဆိုးဒေါသထှကျနတေဲ့ မယားကွီးဟာ မယားငယျကို သူငယျခငျြးတှရေဲ. အကူအညီနဲ့ ကားထဲကနေ ဒရှတျတိုကျဆှဲထုတျပွီး ရိုကျနှကျနခေဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဆံပငျတှကေို ဆှဲဆောငျ့ခဲ့သလို ၊ အဝတျအစားတှကေိုလညျး ဆှဲခြှတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
Source : Viral4Real
ကိုရီးယားကိုအလည်အပတ်ရောက်နေတဲ့ အဆိုတော်ချစ်သုဝေတို့ မိသားစုလေး